Ismchụpụ | Law & More BV
blog » Mwepu
Ismchụpụ bụ otu n'ime usoro kachasị dị anya na iwu ọrụ nke nwere nsonaazụ dị ukwuu maka onye ọrụ. Ọ bụ ya mere na dịka onye were gị n'ọrụ, n'adịghị ka onye ọrụ, ị nweghị ike ịkpọ ya ịkwụsị. You bu n'obi ịchụ onye ọrụ gị n'ọrụ? Ya bụrụ otú ahụ, ị ​​ga-eburu n'uche ọnọdụ ụfọdụ iji mee ka a chụọ n'ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Nke mbu, odi nkpa ichoputa ma onye oru gi na ichoro igba oru no na onodu puru iche. Ndị ọrụ dị otú ahụ na-enwe obi ụtọ mgbasa mgbasa ozi. Nwere ike ịgụ gbasara ihe ga - esi na gị pụta dịka onye were gị n'ọrụ na saịtị anyị: Dismissal.site.
Ala maka mgbasa
Kwesịrị ịtọhapụ mgbasa nke onye ọrụ gị na otu n'ime ihe ndị a:
mgbasa ozi akụ na ụba ọ bụrụ na otu ma ọ bụ karịa ọrụ ga-efu kpamkpam;
enweghi ike ịrụ ọrụ ogologo oge ọ bụrụ na onye ọrụ gị na-arịa ọrịa ma ọ bụ enweghị ike ịrụ ọrụ na-aga n'ihu ruo afọ abụọ ma ọ bụ karịa;
ịrụ ọrụ nke ọma mgbe inwere ike igosipụta na mkpali na onye ọrụ gị ekwesighi ịrụ ọrụ ya;
omume mmebi ma ọ bụ hapụ mgbe onye ọrụ gị na-akpa agwa (kpọrọ ihe) nke ọma na ọrụ;
emebiri mmekọrịta ọrụ ọ bụrụ na iweghachite nke ọrụ ọrụ agaghịzi ekwe omume na nchụpụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere;
enweghị mgbe ọ bụla ọ bụrụ na onye ọrụ gị anaghị abịakarị ọrụ, na-arịa ọrịa ma ọ bụ nwee nkwarụ, nke a enweghị nsonaazụ adịghị mma maka arụmọrụ azụmahịa gị;
mgbasa maka ihe fọdụrụ ọ bụrụ na ọnọdụ ndị ahụ bụ na ọ gaghị abụ ihe ezi uche dị ka gị dịka onye were gị n'ọrụ ịhapụ nkwekọrịta gị na onye ọrụ gị ka ọ gaa n'ihu;
ịjụ ịrụ ọrụ n'ihi akọ na uche mgbe gị na onye ọrụ gị nọdụrụ na tebụl ma wee ruo na nkwubi okwu na enweghị ike ịrụ ọrụ ahụ n'ụdị emegharịrị na ngbanwe abụghị nsogbu.
Kemgbe 1 Jenụwarị 2020, iwu ahụ nwere ntọala ọzọ maka mgbasa, ya bụ mejupụtara ala. Nke a pụtara na gị onwe gị dị ka onye were gị n'ọrụ nwekwara ike ịchụ onye ọrụ gị n'ọrụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ sitere n'ọtụtụ ihe kpatara ịchụpụ gị nye gị ihe zuru oke iji mee ya. Agbanyeghị, dịka onye were gị n'ọrụ, ọ bụghị naanị na ị ga-ahọrọ nhọrọ gị maka ịchụpụ na otu n'ime ihe ndabere iwu ndị a kpọtụrụ aha, kamakwa gosi ma gosipụta ịdị adị ya. Nhọrọ maka otu ihe maka ịchụpụ gụnyere usoro mgbasapụ ụfọdụ.
You na-ahọrọ mgbasa maka ebumnuche azụmaahịa ma ọ bụ enweghị ike ịrụ ọrụ (karịa afọ 2)? N'okwu ahụ, gị onwe gị dị ka onye were gị n'ọrụ ga-etinye akwụkwọ maka ikike ịchụpụ gị site na UWV. Iji ruo eruo inweta ikike dị otú ahụ, ị ​​ghaghị ịkwali n'ụzọ kwesịrị ekwesị ihe mere eji chụọ onye ọrụ gị n'ọrụ. Onye ọrụ gị ga-enwe ohere iji chebe onwe ya megide nke a. UWV na-ekpebi ma enwere ike ịchụpụ onye ọrụ ahụ ma ọ bụ na ọ gaghị ewepụ ya. Ọ bụrụ na UWV nyere ikike maka ịchụpụ na onye ọrụ gị ekwetaghị, onye ọrụ gị nwere ike itinye akwụkwọ arịrịọ na ụlọ ikpe mpaghara. Ọ bụrụ na onye nke abụọ ahụ achọpụta na onye ọrụ ahụ nọ na aka nri, Courtlọikpe Na-ahụ Maka Mpaghara nwere ike kpebie iweghachi nkwekọrịta ọrụ ma ọ bụ nye onye ọrụ gị ụgwọ.
You na-aga chụpụ n'ihi ihe onwe onye? Mgbe ahụ, a ga-agbaso ụzọ nke ụlọ ikpe mpaghara. Nke a abụghị ụzọ dị mfe. Dịka onye were gị n'ọrụ, ị ga-ewu faịlụ buru ibu na ndabere nke enwere ike igosipụta na nchụpụ bụ naanị nhọrọ. Naanị mgbe ahụ ka ụlọ ikpe ga-enye gị nkwado maka arịrịọ iji kwụsị nkwekọrịta ọrụ gị na onye ọrụ gị. Na-etinye ụdị arịrịọ a ịkagbu? Mgbe ahụ onye ọrụ gị nweere onwe ya iji chebe onwe ya na nke a ma kwuo ihe kpatara na ọ kwenyeghị na nchụpụ ahụ ma ọ bụ ihe kpatara onye ọrụ gị ji kwenye na ya kwesiri iru eru maka ụgwọ ọrụ. Naanị mgbe emezuru ihe niile iwu chọrọ, Courtlọikpe Ngalaba ga-aga n'ihu gbasaa nkwekọrịta ọrụ.
Otú ọ dị, site na a mgbasa site na nkwenyerịta, ị nwere ike izere ịga UWV yana usoro ikpe n'ihu ụlọ ikpe mpaghara ma si otú a chekwaa ụgwọ. N'okwu ahụ, ị ​​ga-emerịrị nkwekọrịta kwesịrị ekwesị na onye ọrụ gị site na mkparịta ụka ahụ. Mgbe gị na onye ọrụ gị na nkwekọrịta doro anya, a ga-edekọ nkwekọrịta ndị dị mkpa na nkwekọrịta mmezi. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike ịnwe ụkpụrụ gbasara ego ị ga-akwụ onye ọrụ gị ga-enweta yana ma amaokwu nke na-abụghị asọmpi metụtara. Ọ dị mkpa na edere nkwekọrịta ndị a n'ụzọ iwu kwadoro na akwụkwọ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe amamihe dị na ya ka onye ọka iwu ọkachamara lere nkwekọrịta ahụ anya. Na mberede, onye ọrụ gị nwere ụbọchị iri na anọ ka ọ bịanyechara aka na nkwekorita ndị ọzọ emere.
Ihe maka nlebara anya mgbe a gbasara ya
You kpebiri ịhapụ onye ọrụ gị? Mgbe ahụ, ọ bụkwa ihe amamihe dị na ya ị alsoa ntị na isi ihe ndị a:
Itiongwọ ntụgharị. Dị a metụtara ụgwọ opekatampe kacha nta iji kpebie dabere n'ụkpụrụ akwadoro nke ị ga-eji onye ọrụ gị na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe mgbe ị gara n'ihu ịhapụ gị Site na iwebata WAB, ngụkọta nke ịkwụ ụgwọ mgbanwe a na-ewere ọnọdụ site na ụbọchị ọrụ izizi nke onye ọrụ gị yana ndị ọrụ na-akpọ oku ma ọ bụ ndị ọrụ na oge mmeghe nwekwara ikike ịkwụ ụgwọ. Agbanyeghị, n'aka nke ọzọ, a ga-akagbu ụba ụgwọ nke mgbanwe mgbanwe maka ndị ọrụ gị yana nkwekọrịta ọrụ gafere afọ iri. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga - adịrị gị "dị ọnụ ala" karịa gị dịka onye were gị n'ọrụ, yabụ ọ dị mfe ịchụ onye ọrụ were ọrụ nkwekọrịta ogologo oge.
Compensationkwụ ụgwọ ziri ezi. Na mgbakwunye na ịkwụ ụgwọ ntụgharị, dịka onye ọrụ, ịnwere ike ịkwụ onye na-arụ ọrụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ọzọ. Nke a ga-akacha bụrụ eziokwu ma ọ bụrụ na ị ga-emejọ ihe n'akụkụ gị. N'ihe omume a, dịka ọmụmaatụ, ịchụpụ onye ọrụ enweghị ezigbo ihe mgbagha, ịdị adị nke iyi egwu ma ọ bụ ịkpa oke. Agbanyeghị na akwụghị ụgwọ ziri ezi abụghị otu, ọ metụtara naanị ikpe pụrụ iche nke ụlọ ikpe ga-akwụ onye ọrụ a ụgwọ ziri ezi a. Ọ bụrụ na ụlọ ikpe ahụ nye onye ọrụ gị ụgwọ ziri ezi, ọ ga-ekpebi ego ole dabere na ọnọdụ ahụ.
Ikpeazụ ụgwọ. Ná ngwụsị nke ọrụ ya, onye ọrụ gị nwekwara ikike ịkwụ ụgwọ ụbọchị ezumike ewepụtara. Ugboro ole ezumike onye ọrụ gị nwere ikike, dabere n'ihe ekwenyela na nkwekọrịta ọrụ yana ikekwe CLA. Usoro iwu nke ezumike nke onye ọrụ gị nọ n'ọnọdụ ọ bụla isiokwu ya ji okpukpu anọ karịa ụbọchị ọrụ kwa izu. Na ala nke usoro a, ị ga-akwụ onye ọrụ ụgwọ ụbọchị ezumike, mana ewerebeghị ya. Ọ bụrụ na onye ọrụ gị tozuru ịnwa ọnwa nke iri na atọ ma ọ bụ ego, a ga-atụlerịrị isi okwu ndị a na nkwupụta ikpeazụ ma kwụọ ụgwọ gị.
Yoù bụ onye were gị n’ọrụ nke bu n’obi ịhapụ onye ọ were gị n’ọrụ? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Na Law & More anyị ghọtara na usoro ịchụpụ abụghị naanị ihe mgbagwoju anya kamakwa ọ nwere ike ibute gị nsonaazụ dị ka onye were gị n'ọrụ. Ọ bụ ya mere anyị ji eme ihe ọ bụla anyị nwere ike ime wee chọpụta ọnọdụ gị na ihe ị nwere ike ime. Na ndabere nke nyocha a, anyị nwere ike ịdụ gị ọdụ na usoro ndị ọzọ ziri ezi. Obi dịkwa anyị ụtọ inye gị ndụmọdụ na enyemaka n'oge usoro mgbasa. Have nwere ajụjụ gbasara ọrụ anyị ka ọ bụ maka ịchụpụ mmadụ? I nwekwara ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara mgbasa na ọrụ anyị na saịtị anyị: Dismissal.site.
Previous Post Mmebi na-ekwu: gịnị ka ịchọrọ ịma?
Next Post Kedu ihe ndekọ mpụ?
Nọmba ịtụ ahịa